AbakwaMashishini beeNgingqi zeNdaba yakhe | PIVX
AbakwaMashishini beeNgingqi zeNdaba yakhe
Ndaqala ukuva ngeemali ze-Crypto kunye nabasebenzi babo bokutshala imali, ngelixa ndwendwela umngane ngaphambili konyaka.
Ndandingathembekanga ekuqaleni, ndingathandi ukuza ngaphaya ngaphandle kokuqala ukwenza uphando lwam.
Kwandithatha ixesha ngaphambi kokuba ndikhulule ngokwaneleyo ukubeka idiphozithi yokuqala kwiBitcoin ngqo.
Kwakumnandi ukubona imali yam inomdla omncinci, kodwa kwakhona ididekile ukubona ukuba kunene kuyimfuneko kangakanani ukukhula ngaphambi kokuba ndikwazi ukubona ukubuyiswa okunokwenzeka; Iqonga lokutyalomali endinyulileyo, ndalitshatyalalisa i-premium ukuba ihambise imali.
Ndagqiba ukutshatyalaliswa kweBitcoin yam ngenzuzo encinci, kwaye ndivakalisa ukuba andisayi kuphinda ndiyiphinde.
Ndacinga ukuba iintsuku zemali ze-Crypto ziphelile.
Emva koko umhlobo ogama linguJeffrey wangifundisa kwi-PIVX, ebandakanya ukungaphazamiseki komphakathi kunye nokulula, ibhonasi endiyakwazi ukuyifumana njengento yokuhlawula ibhizinisi lam.
Kwakungayivula kwisizukulwana esitsha sabantu abathengi, ngelixa befumana ixabiso elipheleleyo lokuthengisa, kunye nenzuzo eyongeziweyo yokubuyisela ukutshala imali yam.
Iintengiselwano ndifumene ukuba zikhawuleze kwaye ziphumelele; Kulula njengokuba umntu ethatha umfanekiso weskrini sakho sefowuni.
Ndiyakwazi ukulondoloza i-akhawunti yami ye-PIVX, kwaye kuphela mna ndinokuyifumana. (Iphasiwedi iyadingeka.)
Akukho mali ehlawulwa rhoqo ngenyanga, njengoko kubhanki bendabuko, kwaye iifizi zokuthumela imali zichongiwe.
I-capital-market ye-PIVX, ngeli xesha lo kubhala, kwi-$ 282,099,099 iyithetha ngokwayo; abaninzi abantu babona ukubonakala kwiplatifomu.
Ngokungafani neB Bitcoin, akuyi kuba neyezigidi ezingama-21 kuphela; Kungcono imali entsha iveliswe ngokusekelwe kwindlela eninzi ngayo. (Imali echazwe ngaphambili echazwe eceleni, ngokwengqiqo yomntu.)
Akukho ndawo kwi-capital, kwaye unako ukukrazula xa ufuna, kodwa ngokushiya kuyo, sinokufaka isandla kwiqula elikhulu labantu abalinganiswayo, kwaye sinesimo semali esomeleleyo esoloko sikhula, sidlula kakhulu Bitcoin.
Njengoko sibheke kwixesha elizayo, apho i-Crypto iba yifom eyaninzi yamkelwa ithenda, ndingathanda ukunamathela kwinto endiyaziyo nokuthembela, kwaye i-PIVX iya kuba yinto yam enye yokukhetha.
I-PIVX ibonakala ilapha ukuhlala.